ဒါဟာအိမ်၏နှစ်သိမ့်ပထမတစ်ချက်အသေးစိတျမှာအရေးမကြီးပါဝင်ပါသည်ကြောင်းလူသိများသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာနေတဲ့အဆင်ပြေ pastime ၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး - ဆိုစူပါမားကတ်, သင်လုပ်နိုင်သည်အရသာသို့မဟုတ်လေထုအမြင်ကြည်လင်စေရန်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သဘာဝအရသာစေရန်ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတကမ်းလှမ်းမှုကို၏လူကြိုက်များ၏အလငျး၌။
ဘယ်လိုအရသာစေရန် - ပစ္စည်းများ
အကြိုက်ဆုံး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ ။
မာစတာအတန်းအစား - ဂျယ်လ်အရသာစေရန်မည်သို့
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အရသာအတွက်ဂျယ်လ်၏အခြေခံပေါ်မှာဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဆမ်ဂျယ် gelatin ကနေပြင်ဆင်: ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ခုလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်နည်းနည်းကိုရေသွန်းလောင်းခြင်းနှင့် 15-20 မိနစ်ထားခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
gelatin အဘို့, ဆိုးဆေး၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်ပါ။
အပူ 50 လောက်ရေ g နဲ့နှိုးဆော်ညင်ညင်သာသာအရောအနှောသို့သွန်းလောင်း။
ရေနွေးဖြစ်လာတဲ့အခါ, 5-6 ml ကိုက glycerol အနံ့အရသာအနာဂတ်သို့သွန်းလောင်း။ တနည်းကား, ညင်ညင်သာသာပေမယ့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တစ်ဇွန်းနှင့်အတူမွှေပေးပါ။
သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းတစ်ဖန်အိုးမှာမရရှိနိုင်ကြင်နာစွာဆေးကြောဖို့မေတ္တာရပ်ခံပြီးခြောက်သွေ့လျက်ရှိသည်။ ကွန်တိန်နာသို့သင်အကြိုက်ဆုံး aromasla ၏ 20 ပေါက်ယို။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအတော်ကြာရောမွှေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, တစ်ဦးချင်းစီကရေနံကို 10 ပေါက်ယူပါ။
အဲဒီနောကျအိုးတလုံးရလဒ် gelatin အရောအနှောအစောပိုင်းကခဲ့လောင်းနျြရစျ။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, အရည်နျဌာနခှဲသို့မဟုတ် Mint အရွက်ထည့်ပါ။
မကြာမီ gelatin အရောအနှော thickens, သင်သည်အရသာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရနံ့အမျိုးမျိုးနှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်အိမ်တော်ကိုဤအရသာအတော်ကြာ၏ဖန်တီးမှုအကြံပြုသည်။ ဒီအသင်သည်မည်သည့်အခိုက်မှာခံစားချက်ကိုက်ညီသောအမွှေးအကြိုင်ခံစားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Oplesti တိပ်ခွေ Rim အဖြစ်?
ယောက်ျားရဲ့အ scarves အဘို့မိန့်တော်မူပုံစံများ
တစ်ဦး sundress ချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါစစ်ခင်းကျင်းထဲကနေအသကျရှငျကအခန်းပရိဘောဂ - လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်း
Gucci စုစည်းမှု - နွေဦး-နွေရာသီ 2015